क्षण मा एक विदेशी भाषा को ज्ञान मात्र छैन इनामदायी शौक, तर पनि वास्तविक आवश्यकता छ। सबैलाई अंग्रेजी सिक्दै लागि आफ्नै कारण छ। कसले - व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न आत्म-विकास गर्न प्रतिबद्ध छ, कसैले बन्न एक अनुवादक, यात्री, विदेशी भाषा को ज्ञान धन्यवाद राम्रो देशको संस्कृति बुझ्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ चाहन्छ। तपाईं गर्न सक्छन् एक भाषा सिक्न, तपाईं पाठ्यक्रम उपस्थित गर्न सक्नुहुन्छ, र यो अभिभावक लागू गर्न सम्भव छ। निस्सन्देह, व्यक्तिगत कक्षाहरू भाषा सिक्न छिटो अनुमति दिन्छ, र यो यसको आफ्नै कारण छ।
पहिलो कारण - व्यक्तिगत तालिका। उदाहरणका लागि, तपाईं धेरै, बारम्बार व्यापार यात्राको एक लक्जरी तपाईं लागि पाठ्यक्रम धाउन धेरै समय लाग्न काम। के गर्ने? एक अभिभावक अनलाइन सिक्ने - सही समाधान छ। साइट preply.com, तपाईं सबै भन्दा राम्रो Tutors पाउन सक्नुहुन्छ। होने यो वेबसाइट आउन, तपाईं व्यक्तिगत सिक्ने लागि शिक्षक, उदाहरणका लागि तपाईं नोवोसिबिर्स्क मा अंग्रेजी को एक अभिभावक आवश्यकता हो, चयन गर्न सक्नुहुन्छ शहर र तपाईं संग प्रशिक्षण सुरु गर्न तयार छन् जो कोच देख्ने केहि सेकेन्ड पछि खोज प्रविष्ट गर्नुहोस्। यहाँ शिक्षकहरू एउटा संक्षिप्त सारांश, साथै प्रशिक्षण को लागत छ। अर्को, तपाईं सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प परिभाषित र काम तिर्ने द्वारा पहिलो पाठ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रशिक्षण को लाभ के हुन्? तपाईं आफ्नो घर वा कार्यालय नछोडी, तपाईंले आफ्नो संचार सीप सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, समय बचत गर्नुहोस्। पहिलो पाठ यदि तपाईं रुचि छैन, तपाईं अर्को अभिभावक चयन गर्नुहोस् र आफ्नो शिक्षा जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
दोस्रो कारण - व्यक्तिगत दृष्टिकोण। उदाहरणका लागि, तपाईं भर्ना गर्ने निर्णय भने, तपाईँले व्यक्तिगत दृष्टिकोण शिक्षकको आशा छैन, पाठ्यक्रम, तपाईं केन्द्रित हुनेछ। तर, प्रत्येक विद्यार्थी आफ्नै स्पेस छ, र समूह पूर्व-निर्धारित छ जो समग्र कार्यक्रम, को लागि प्रशिक्षित छ। बारी मा, तपाईं संग एक अभिभावक माथि सिर्फ एक यस्तो कार्यक्रम, विशेषज्ञता छ आफ्नो स्तर वृद्धि हुनेछ जो छनोट हुनेछ। तपाईं प्रशिक्षण मा जोड दिए हुनेछ के, हामीलाई बताउन संकोच गर्न सक्दैन। विशेष गरी महत्त्वपूर्ण तपाईं, उदाहरणका लागि, जो समावेश आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि संकीर्ण विषय, रुचि राख्नुहुन्छ भने, व्यक्तिगत दृष्टिकोण छ। जटिल प्राविधिक नियम र अभिभावक प्रशिक्षण मा माग को अध्ययन।
तेस्रो कारण - अंग्रेजी सिक्दै लागि सहज वातावरण। अनलाइन सिक्ने को लाभ तपाईं एक दर्शक अघि सार्वजनिक बोल्ने को लजालु हुँदैन भन्ने छ। तपाईं मात्र पाठ्यक्रम अन्य विद्यार्थीहरूको उपस्थिति बिना आफ्नो अभिभावक संग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो घर को आराम मा, तपाईं आराम र भाषा को अध्ययन गर्न सबै शक्ती समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ, अतिरिक्त उत्तेजना बस प्रभावकारी सिक्ने योगदान छैन। त्यसैले preply.com मंच यहाँ तपाईं स्वयं आफ्नो नकारात्मक भावना पैदा गर्ने छैन शिक्षक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यति लोकप्रिय छ। सारांश समीक्षा र मन पराएका सिक्ने पहिलो पाठ आदेश पछि, तपाईं अंग्रेजी सिक्ने यो विधि सबै लाभ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
चिसो - यो के हो? अर्थ, पर्यायवाची, उदाहरण
को prepositions कन्सोल (मुख्य मतभेद) बाट भिन्न। फरक prepositions र उपसर्गको
जापान को पहिलो राजधानी। महान् जापानी साम्राज्यको इतिहास
यो साँचो बिरालोहरु आफ्नो भावना बारेमा सबै थाहा छ?
मृत्यु, दफन को माइकल ज्याक्सन गरेको कारण
Sprats संग स्यान्डविच कसरी खाना पकाउनु
कार्बुलकल छालाको तीव्र पुष्प-गर्दनको सूजन हो: कारणहरू, उपचार, रोकथाम
"सफलता" - माछा मार्ने लागि Akhtuba आधार मा